Basikety – Mada N1A 2018 : Manohy ny lalany hatrany ny Ascut -
AccueilSongandinaBasikety – Mada N1A 2018 : Manohy ny lalany hatrany ny Ascut
Nampiseho ny fahaizany ny Ascut Atsinanana. Hatreto mantsy, mbola tsy resy io ekipan’i Toamasina io tao anatin’ny andro efatra nifaninanana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, dingana faharoa, eo amin’ny taranja basikety sokajy N1A lehilahy. Fifaninanana karakarain’ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB) etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny 19 – 28 oktobra izao.
Raha toa mantsy ka nandresy ny 2BC Vakinankaratra tamin’ny isa mavesatra, 72 noho 37, ny Ascut teo amin’ny fihaonana voalohany, dia nandavo ny SBBC Boeny tamin’ny isa mavesatra, 103 noho 52, ihany koa izy ireo. Tsy vitan’izay, nofaizin’izy ireo tamin’ny isa 85 noho 57 ny Cosfa Analamanga. Noho izany, mbola tsy resy mihitsy ny Ascut, ahitana an-dry Did’s, Tanjona, Mbola Kely sy Ibrahim ary Damivelo, tao anatin’ny lalao telo natrehiny amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Fandresena telo no azon’izy ireo. Izany hoe, tsara toerana ity ekipan’i Toamasina eo amin’ny vondrona “B” misy azy.
Teo amin’ny sokajy N1A vehivavy indray, fandresena roa sy faharesena iray izao no azon’ny Ascut. Lavon’ny Fandrefiala Analamanga tamin’ny isa 65 noho 60 izy ireo teo amin’ny fihaonana voalohany. Nanarina izany kosa ny Ascut ka nanilika ny JSB Boeny tamin’ny isa 77 noho 52, ary mbola nandavo ny BC Est Atsimo Andrefana tamin’ny isa mazava, 80 noho 50, indray omaly.
Mbola mitohy kosa ny fifanintsanana isam-bondrona. Marihina fa mpiara-miasa amin’ny FMBB amin’ity fifaninanana nasionaly eo amin’ny basikety N1A lahy sy vavy ity ny Vondrona RLM Communication.